နန်းဆိုင်နွမ်| September 18, 2012 | Hits:2,620
| | ရခိုင်ဒေသ ပဋိပက္ခ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
true talker September 19, 2012 - 12:42 am Please do it fair and square. Tayar ko nut saunt pha tae.
Reply david September 19, 2012 - 10:12 am လူသုံးယောက်မုဒိန်းမှုကပေါ်ပြီးသေဒဏ်တောင်ပေးပြီးပြီး တောင်ကုတ်လူသတ်ပွဲကိုလူသုံးရာ